Imiqadi eveziweyo yongeza umlinganiswa ekhitshini lakho | Bezzia
UMaria vazquez | 17/06/2022 18:00 | Ukuhombisa amaqhinga
Kukho izinto ezinjengeemitha eziveziweyo banobukho obukhulu kwaye unike nayiphi na indawo enobuntu obukhulu. Ikhitshi ngokuqhelekileyo enye yabakhethiweyo kwaye enye yeyona nto ixhamle ngokudibanisa le nto. Ukuba akunjalo, jonga izindululo esabelana ngazo nawe namhlanje.
Zombini imiqadi yomthi kunye nekhonkrithi yongeza umlinganiswa ekhitshini. Nangona kunjalo, iziphumo ezifunyenwe ngenye kunye nezinye zahluke kakhulu. Ngelixa imiqadi yokhuni yongeza umgangatho kunye ne-rusticity kwisithuba, ezo zekhonkrithi zidlala naloo ndawo enzima yoshishino.
Sesiphi isimbo ofuna ukusinika ikhitshi lakho? Ungasiqinisa eso simbo ngokudibanisa izinto zokwakha njengalezi okanye, sebenzisa iinkcukacha zoqobo zendlu ezifana nemiqadi ukubumba ikhitshi lakho uzivumele ukuba ukhokelwe zezi zinto. Ziindlela ezimbini ezahlukeneyo zokwenza kwaye zombini ziyasebenza.
1 Imiqadi yomthi eveziweyo
1.1 Umoya weRustic
1.2 entsha kwaye yangoku
1.3 Iinkcukacha ezincinci
2 Imiqadi yekhonkrithi eveziweyo
Imiqadi yomthi eveziweyo
Iiplanga eziveziweyo zokhuni zizona zithandwa kakhulu ekhitshini. Kwaye akusothusi, kuba banika uchuku olufudumeleyo olwenza eli gumbi lizive likhulu. Kwaye xa ikhitshi iba liziko le-nerve yekhaya, xa ixesha elininzi lichithwa kuyo kunakwabanye, kubalulekile ukuba libe yindawo efudumeleyo.
Ukufudumala akusoloko kuthetha i-rustic, nangona ingaba njalo. iisilingi zamaplanga igalelo lendalo ekwandiseni i-rusticity yekhitshi. Ngokukodwa abo apho imiqadi yokhuni ibonisa ukugqitywa okubunjwe kukuhamba kwexesha.
Ubumnyama ngakumbi iinkuni kwaye ngakumbi kwanele, ngakumbi kuya kuqinisa isitayela se-rustic sekhitshi. Ayizizo zonke iikhikhithi ezinolu hlobo lwesilingi, nangona kunjalo, zifuna ukuqinisa olu hlobo. Imiqadi ethe tye yerustic egqitywe ngokufanayo ilungele ukuhlobisa iikhikhini zanamhlanje kunye ne-avant-garde.
entsha kwaye yangoku
Imiqadi enemiphetho ecocekileyo kunye neetoni eziphakathi xa ibekwe kuphahla olumhlophe kwaye kumgama omde ukusuka komnye nomnye, bazisa ukuhlaziyeka okukhulu ekhitshini. Isilingi iphefumla kwaye imiqadi iyaqhubeka nokubonelela ngokufudumala ekhitshini kodwa ngendlela yanamhlanje.
Ukuba ukhangele ikhitshi yangoku, eqaqambileyo kwaye efudumeleyo, bheja ngolu hlobo lwemiqadi kunye noqwalaselo. Awuyi kufuna, ukongeza, ukuba ziyimiqadi eqinileyo. Namhlanje kukho imiqadi engenanto kwaye izinto ezixelisa umthi ngendlela enempumelelo kakhulu ethoba iindleko,
Ukuba awufuni ukubeka imiqadi yokhuni kwisilingi kodwa awufuni ukuyeka umoya abawunikezayo ekhitshini, zisebenzise kwiindawo ezithile njengoko kubonisiwe kulo mfanekiso ulandelayo. Siyabathanda njengesixhobo sokuba yahlula izithuba ngokubonakalayo: ikhitshi legumbi lokutyela, indawo yekhitshi…
Imiqadi yekhonkrithi eveziweyo
Imiqadi yekhonkrithi ifumene ukugqwesa kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ukunyuka kwesitayela soshishino iye yalithanda yaye namhlanje baninzi abathi kuhlaziyo bathandazele ukufumana umqa wolu hlobo abanokuwucoca baze bawushiye emehlweni. Kwaye ayinakuphikiswa ukuba bongeza umlingiswa kunye nokuninzi kwikhaya.
Imiqadi yekhonkrithi ayisetyenziswanga njengemiqadi yomthi kwaye nangona inokudalwa ukusuka ekuqaleni, njengento yokuhombisa, Abaqhelekanga ukufola. Inkathalo ithathwa ukuze kubonakale ngathi bebesoloko bekhona, ukuba bakhona ngenxa yokuba bayafuneka ngokwesakhiwo. Ngaloo ndlela, into eqhelekileyo kukuba bawela ikhitshi kwaye baphumle kwikholamu enye okanye ezininzi zezinto ezifanayo.
Zingena ngokugqibeleleyo Amakhitshi emizi-mveliso, kodwa kungekuphela kwezi. Njengoko unokubona kwimifanekiso, zonke iikhikhithi eziveze imiqadi yekhonkrithi zineendlela ezahlukileyo kakhulu. Abanye banenkuthazo ethile yevintage, abanye babheje kwizinto zakudala kwaye kukho ezo zibalaseleyo Ubuhle obuncinci.
Loluphi uhlobo lomqadi othanda kakhulu ukuprinta ubuntu ekhitshini lakho? Ubuya kuzisebenzisa njani? Siyathemba ukuba imifanekiso ikukhuthaze ngokwaneleyo ukuba uphendule le mibuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ukuhombisa amaqhinga » Imiqadi eveziweyo yongeza umlinganiswa ekhitshini lakho
San Fermin yaseNavarrese